दिल्लीमा मारिएका नेपालीलाई न्यायको आशा, भारतको सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो फैसला, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दिल्लीमा मारिएका नेपालीलाई न्यायको आशा, भारतको सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो फैसला
काठमाडौं। भारतको दिल्लीमा नेपालीसमेत मारिएको चर्चित आरुषी–हेमराज हत्याकाण्डमा नेपाली नागरिक हेमराज बञ्जाडेले न्याय पाउने आशा बलियो भएको छ । इलाहाबाद हाइकोर्टको फैसलामा रोक लगाउँदै भारतको सर्वोच्च अदालतले हत्याको आरोप लागेका आरुषीका मातापिता राजेश तलबार र नुपुर तलबारलाई रिहा गर्ने फैसला रोक्न आदेश दिएको छ । यो घटनामा आरुषी तलवारसँगै अर्घाखाँचीका हेमराज बञ्जाडेसमेत मारिएका थिए । हेमराज यो परिवारमा घरेलु कामदार थिए ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले आज आरुषी–हेमराज हत्याकाण्डमा आरुषीका मातापितालाई रिहा गर्ने इलाहाबाद हाइकोर्टको फैसलाविरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सिबिआइ)ले गरेको अपिल स्वीकार गर्दै इलाहाबाद हाइकोर्टको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले अबको सुनुवाइ हेमराजकी पत्नी खुमकलाको अपिलसँगै हुने आदेश दिएको छ । इलाहाबाद हाइकोर्टले गतवर्षको अक्टोबर १३ मा तलबार दम्पतीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
१६ मे २००८ मा दिल्लीसँग जोडिएको नोएडामा १४ वर्षकी आरुषीको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो । अर्को दिन घरको छतमा नेपाली कामदार हेमराजको समेत शव भेटिएको थियो । त्यसपछि भएको अनुसन्धान र सुनुवाइपछि सिबिआइ अदालतले आरुषीका मातापितालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, गतवर्ष इलाहाबाद हाइकोर्टले यो फैसला उल्ट्याउँदै तलबार दम्पतीलाई रिहा गरेको थियो ।
उच्च अदालतको फैसला आउनेबित्तिकै मृतक हेमराजकी पत्नी खुमकला दिल्ली पुगेर उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । खुमकलासँगै सिबिआइले समेत सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यतिबेला दिल्लीमा मिडियासँग कुरा गर्दै खुमकलाले सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने विश्वासका साथ आफू नेपालबाट दिल्ली पुगेको बताएकी थिइन् ।
घटना सन् २००८ मा भएको थियो । त्यतिबेला भारतको नोयडाका उच्च वर्गका डाक्टर दम्पत्ती राजेश तलवार र नुपुर तलवारकी छोरी आरुषी र उनको घरमा काम गर्ने नेपाली घरेलु कामदार हेमराज बञ्जाडेको मे महिनामा हत्या भएको थियो । मे १६ को राती यी दुईको घरमै हत्या भएकोमा सुरुमा आरुषीको मात्र शव भेटिएपछि उनका मातापिताले हेमराजमाथि हत्याको आरोप लगाएका थिए । तर भोलिपल्ट हेमराजको पनि शव छतमा भेटिएको थियो ।
उच्च घरानाको यो हत्याकाण्डले सिंगो भारतमा हंगामा भएपछि यसको जाँचको जिम्मा प्रहरीबाट फिर्ता लिइ भारतको उच्चस्तरीय जाँच एजेन्सी सिबीआइलाई दिइएको थियो । सिबिआइ जाँचबाट आरुषीका मातापिता राजेश तलवार र नुपुर तलवारलाई दोषी ठहर गरी जेलमा राखिएको थियो । यही अक्टोबरमा भएको सुनुवाइमा अदालतले तलवार दम्पत्तीलाई निर्दोष ठहर गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आयो ।
अदालतले तलवार दम्पत्तीलाई निर्दोष ठहर गरेपछि उनीहरुलाई यही १३ अक्टोबरका दिन रिहा गरिएको थियो । २ महिनापछि मृतक हेमराजकी पत्नी खुमकला दिल्ली पुगेर उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । दिल्लीमा मिडियासँग कुरा गर्दै खुमकलाले सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने विश्वासका साथ आफू नेपालबाट दिल्ली पुगेको बताएकी थिइन् ।
खुमकलाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनमा तलवार दम्पत्तीलाई रिहा गर्ने निर्णय गलत भएको बताउँदै यसको पुष्टिका लागि उनले केही आधारहरु पनि दिएकी थिइन् । खुमकलाले इलाहाबाद उच्च अदालतले कसैलाई पनि दोषी ठहर नगरेकोप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन् । उच्च अदालतले आरुषी र हेमराजको हत्या भएको मानेको थियो । तर, हत्या कसले गरेको हो भन्ने नबताइ तलवार दम्पत्तीलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो । यो हत्याकाण्डमा दुवैको हत्या भएको भनेको अदालतले कसैलाई पनि हत्यारा ठहर नगरी मुद्दा बन्द गरेको थियो ।
खुमकलाले तलवार दम्पत्तीमाथि नै आरोप लगाएकी छिन् । घरभित्र भएको यति ठूलो घटनामा तलवार दम्पत्तिले समेत उनीहरुको हत्या कसले र किन गरेको हो भन्ने पत्ता लगाउन नसकेको र हत्याबारेमा तथ्य पत्ता लगाउन चासो नदिएको हुँदा उनीहरु नै हत्यामा संलग्न भएको हुन सक्ने उनको दावी छ ।